Kushomeka kwezviputi muApple (uye pasi) kunogona kuwedzera mitengo munguva pfupi | Ndinobva mac
Chip kushomeka kuApple (uye nepasirese) kunogona kukwidza mitengo munguva pfupi
Manuel Alonso | 29/03/2021 12:00 | Noticias
Makambani ese eetekinoroji ari pakachenjerera kushomeka kwechip kuri kuitika. Vanga vachiona kwenguva yakati kuti kupi kweizvi zvikamu zvakakosha hazvisvike muhuwandu uye kuwanda kwazvinofanira kuita. Asi ikozvino alamu inomutswa zvakare nekuwedzera mukushomeka uku. Zvinotaridza kuti matura emakambani ari kutanga kupera uye izvo zvinoreva kuti hauchakwanise kugadzira zvimwe zvishandiso zvakaita seMac uye nekudaro mashoma mamodheru pamusika uye pamwe zvaizoreva kuwedzera kwemutengo.
Nyika iri kutambura nekushomeka kwekupa semiconductor. With chip kugadzirwa matambudziko kukanganisa zvitengeswa zvemakambani mazhinji. Dambudziko repasirese, iro rakawedzera zvichitevera moto paRenesas chip foundry munaKurume, yakatambanudza ese akasara ekugadzira huwandu uye iri kukanganisa maindasitiri mazhinji akasiyana. Kubva kune vanogadzira mota kune avo vakazvipira kuzadza musika nema smartphones kana makomputa akadai seApple kana Samsung.
Sekureva kwemuongorori Matt Bryson, nekuda kwe "kuwedzera kuomarara kwechip chip" uye kushomeka kwe "kuwedzera kukura kweanokwanisa" ekugadzira, nekushomeka "kuchisvika nhanho dzinosekesa," dambudziko rave kuita dambudziko hombe. Kune vazhinji smartphone nevatengesi vezvigadzirwa. Xiaomi akabvuma kuti ine dambudziko nenhamba yezviputi zvekushandisa. Izvi zvinoreva kuti iri kutodhonza matura uye ivo vari kupera. Zvichida, kusvika padanho rakafanana, mamwe maindasitiri ari kuita nenzira imwecheteyo.
Pane imwe nguva, kushomeka kwechinhu kuwanikwa kunogona kumanikidza Apple nevamwe kuti vagadzirise mutengo-wepfupi. Izvi inogona kukanganisa zvakanyanya zvikwereti zvevatengi. Mukufamba kwenguva zvinogona kutobatsira kambani, asi kune avo vedu vanogara zuva nezuva, iyo pfupi nguva ndiyo yakakosha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Chip kushomeka kuApple (uye nepasirese) kunogona kukwidza mitengo munguva pfupi
Nomad Sport Lunar Grey, Nomad yakasarudzika tambo